စာဖတ်ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေရှာ — Steemit
mmunited (60) in community • 18 days ago
စာဖတ်ခြင်းနဲ့ ပိုက်ဆံ ရနိုင်သလား။ ပိုက်ဆံရတဲ့ နေရာအချို့တော့ရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စာဖတ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ စာရေးတာ ပရို ဂရမ် ရေးတာ၊ ကွန့်မန့်ရေးတာတွေနဲ့တော့ ရနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အခု ရည်ရွယ်ထားတာကတော့ facebook သုံးရင်းနဲ့ ပိုက်ဆံရဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံး စာဖတ်တာ ဆိုတာကို အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆို ဖို့လိုပါတယ်။ စာဖတ်မဖတ်ကို ကျွန်တော်တို့ တိုက်ရိုက်မသိနိုင်ပါဘူး။ အချို့တွေကတော့ မေးခွန်းတွေ မေးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရှေ့ကဖြေထားတာကိုပဲ ကြည့်ပြီး ပြန်ဖြေသွားကြပါတယ်။ အဲ့ဒိတော့ ကျွန်တော် အဓိပ္ပာယ် သတ်မှတ်ချင်တဲ့ စာဖတ်ခြင်းဆိုတာကတော့ ပိုစ့်ကို မျှဝေခြင်း
ပိုစ့်ကို like ပေးခြင်းနဲ့
ပိုစ့်ကို မန့်ပေးခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသုံးမျိုးထဲက တစ်မျိုးလုပ်ရင်ရပါတယ်။ တစ်မျိုးထက်ပိုလုပ်ရင်လဲ ပိုကောင်းပါတယ်။
ဒုတိယ အချက်က ကျွန်တော်တို့ ပိုက်ဆံ ဘယ်လိုရှာမလဲ။ Facebook ပေ့စ်ကနေ ပိုက်ဆံရှာလို့ရပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို တော့ ပြောမပြတော့ပါဘူး။
ရလာတဲ့ ပိုက်ဆံကို ဖတ်ရှုသူတွေက ၄၀%၊ စာရေးသူတွေက ၄၀% ခွဲဝေပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ နှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းကိုတော့ ကုန်ကျစရိတ် တွေနဲ့ အက်မင် အဖွဲ့ အတွက်ထားပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Facebook ကနေ ပိုက်ဆံရဖို့ ဆိုတာ လူအများကြီး ဝင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ အဲ့ဒိအတွက် facebook ပေါ်မှာ လူသိများတဲ့သူ စာရေးဆရာ စတာတွေရဲ့ ပိုစ့်တွေကို ကူးပြီး မျှဝေပေးဖို့လိုပါတယ်။ အဲ့ ဒိအတွက် စာရေးဆရာတွေကိုလဲ ညာဏ်ပူဇော်ခ ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကတော့ ကျွန်တော့်စိတ်ကူးပါ။ အခု facebook မှာ လုပ်စားနေတဲ့ သူအများစုက မဟုတ်မဟတ် သတင်းတွေကို ဖြန့်ပြီး ငပိန်းဖမ်းပါတယ်။ အဲ့ဒိလိုလုပ်မယ့် အစား စာရေးသူရော စာဖတ်သူပါ အကျိုးရှိမယ့် အရာ တစ်ခုကို ဆောင်ရွက်ချင်ပါတယ်။
စာဖတ်သူတွေကို ခွဲဝေပေးတဲ့ နေရာမှာ ကျဘမ်း ခွဲဝေပေးရမလား။ ဒါမှမဟုတ် တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို သိမ်းထားပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ ပမာဏ တစ်ခုပြည့်မှ ခွဲပေးတာမျိုးကို လုပ်ဆောင်မလားဆိုတာ စဉ်းစားနေဆဲပဲ ရှိပါသေးတယ်။
စာဖတျခွငျးနဲ့ ပိုကျဆံ ရနိုငျသလား။ ပိုကျဆံရတဲ့ နရောအခြို့တော့ရှိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ စာဖတျတာတော့ မဟုတျပါဘူး။ စာရေးတာ ပရို ဂရမျ ရေးတာ၊ ကှနျ့မနျ့ရေးတာတှနေဲ့တော့ ရနိုငျပါတယျ။ ကြှနျတျောအခု ရညျရှယျထားတာကတော့ facebook သုံးရငျးနဲ့ ပိုကျဆံရဖို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ပထမဆုံး စာဖတျတာ ဆိုတာကို အဓိပ်ပာယျဖှငျ့ဆို ဖို့လိုပါတယျ။ စာဖတျမဖတျကို ကြှနျတျောတို့ တိုကျရိုကျမသိနိုငျပါဘူး။ အခြို့တှကေတော့ မေးခှနျးတှေ မေးပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ရှကေ့ဖွထေားတာကိုပဲ ကွညျ့ပွီး ပွနျဖွသှေားကွပါတယျ။ အဲ့ဒိတော့ ကြှနျတျော အဓိပ်ပာယျ သတျမှတျခငျြတဲ့ စာဖတျခွငျးဆိုတာကတော့ ပိုဈ့ကို မြှဝခွေငျး
ပိုဈ့ကို like ပေးခွငျးနဲ့
ပိုဈ့ကို မနျ့ပေးခွငျးတို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒီသုံးမြိုးထဲက တဈမြိုးလုပျရငျရပါတယျ။ တဈမြိုးထကျပိုလုပျရငျလဲ ပိုကောငျးပါတယျ။
ဒုတိယ အခကျြက ကြှနျတျောတို့ ပိုကျဆံ ဘယျလိုရှာမလဲ။ Facebook ပစျေ့ကနေ ပိုကျဆံရှာလို့ရပါတယျ။ အသေးစိတျကို တော့ ပွောမပွတော့ပါဘူး။
ရလာတဲ့ ပိုကျဆံကို ဖတျရှုသူတှကေ ၄၀%၊ စာရေးသူတှကေ ၄၀% ခှဲဝပေေးသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ကနျြတဲ့ နှဈဆယျရာခိုငျနှုနျးကိုတော့ ကုနျကစြရိတျ တှနေဲ့ အကျမငျ အဖှဲ့ အတှကျထားပေးမှာ ဖွဈပါတယျ။
Facebook ကနေ ပိုကျဆံရဖို့ ဆိုတာ လူအမြားကွီး ဝငျကွညျ့ဖို့လိုပါတယျ။ အဲ့ဒိအတှကျ facebook ပျေါမှာ လူသိမြားတဲ့သူ စာရေးဆရာ စတာတှရေဲ့ ပိုဈ့တှကေို ကူးပွီး မြှဝပေေးဖို့လိုပါတယျ။ အဲ့ ဒိအတှကျ စာရေးဆရာတှကေိုလဲ ညာဏျပူဇျောခ ပေးရမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကတော့ ကြှနျတေျာ့စိတျကူးပါ။ အခု facebook မှာ လုပျစားနတေဲ့ သူအမြားစုက မဟုတျမဟတျ သတငျးတှကေို ဖွနျ့ပွီး ငပိနျးဖမျးပါတယျ။ အဲ့ဒိလိုလုပျမယျ့ အစား စာရေးသူရော စာဖတျသူပါ အကြိုးရှိမယျ့ အရာ တဈခုကို ဆောငျရှကျခငျြပါတယျ။
စာဖတျသူတှကေို ခှဲဝပေေးတဲ့ နရောမှာ ကဘြမျး ခှဲဝပေေးရမလား။ ဒါမှမဟုတျ တဈယောကျခငျြးစီရဲ့ ပိုကျဆံတှကေို သိမျးထားပွီး သတျမှတျထားတဲ့ ပမာဏ တဈခုပွညျ့မှ ခှဲပေးတာမြိုးကို လုပျဆောငျမလားဆိုတာ စဉျးစားနဆေဲပဲ ရှိပါသေးတယျ။
Posted from my blog with SteemPress : https://myanmarpress.xopus.io/?p=701
community facebook myanmar steem steempress
aggamun (54) · 18 days ago
ဂွတ် တယ်ထင် ဒူး သာ ဒူး ဘဒို။ ကျွန်တော် လုပ်နိုင်တာ ရှိလည်း ပြော သာပြော။
mmunited (60) · 18 days ago
ဘရို့ အသိတွေကိုလဲ invite လုပ်ပေးပါဦး။
ဟုတ် ကဲ့ ဘဒို
Your UA account score is currently 1.602 which ranks you at #34341 across all Steem accounts.
Your rank has improved 501 places in the last three days (old rank 34842).
In our last Algorithmic Curation Round, consisting of 218 contributions, your post is ranked at #148.